२० लाख दिएर निर्देशक नाल्बोले लिए पल ! « Ramailo छ
२० लाख दिएर निर्देशक नाल्बोले लिए पल !
नायक पल शाहले ‘शत्रु गते’ पछि २० लाख भन्दा बढि पारिश्रमिक लिएर नयाँ फिल्म साइन गरेका छन् । निर्देशक सुरज सुब्बा ‘नाल्बो’ले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म ‘हृदय भरी’ महंगो पारिश्रमिकमा पक्का भएका हुन् ।
नेपालमा नायकले २० लाख पारिश्रमिक पाउनु भनेको राम्रो पारिश्रमिक हो । हुन त अनमोल केसीले ५० लाख लिएर ‘ए मेरो हजुर २’ र ‘ब्याचुलर बन्टी’ दुई फिल्म साइन गरिसकेका छन् । प्रदिप खड्का पनि महंगो पारिश्रमिक लिने नायकको रुपमा पर्न आउँछन् । अनमोल र प्रदीपपछि पल शाह मंहगा नायक बनेका हुन् ।
पल पछिल्लो समयमा फिल्ममा भन्दा बढि म्यूजिक भिडियोमा व्यस्त छन् । यो फिल्ममा पल शाह रहने पक्का भए पनि नव नायिकाको खोजी भईरहेको फिल्मका निर्देशक सुरज सुब्बाले बताए । उनले पललाई बीस लाख पारिश्रमिक दिएको स्विकार गरे ।